हरेक वर्ष हामी राशि को कुनै पनि साइन लागि पूरा। र सबै वर्ष दौर र हाम्रो लुगा हाम्रो भित्री र उपहार मा, सधैं यो प्राणी को वर्ण प्रस्तुत। यस कति साँचो थाह, तर अझै पनि यो हामीलाई सानो सुखी र बढी सफल बन्न मदत गर्नेछ भन्ने विश्वास गर्न चाहनुहुन्छ!
र यो वर्ष - ड्रैगन को वर्ष - हामी आफ्नो घर यो प्रतीक संग सजाउनु हुनेछ। तपाईं, उदाहरणका लागि, मूल बनाउन सक्छ तकिया। र यसको आवेदन पूरक गर्न! ड्रागन, सिलना जो छवि गर्न सकिँदैन वा पलीथीन तकिया गर्न चिपके राम्रो र मीठो हुन सक्छ, तर गर्न सक्छन् - बलियो formidable। उत्पादन सिर्जना गर्ने मास्टर तपाईं कसरी चाहन्छु।
बच्चालाई सुरुवाल को घुँडा मा बाहिर पहना वा मेरो आमा अचानक इच्छा देखिन्छ भने, यो ठूलो आवेदन छोराछोरीको वस्त्र मा "ड्रागन" हेर हुनेछ। निस्सन्देह, यो मामला मा, एक mythical प्राणी राम्रो-natured र हँसिलो हुन हुनुपर्छ। हुनत प्यारा डायनासोर पूर्ण यी उद्देश्यका लागि उपयुक्त।
विशेष विकल्प - जन्मदिन लागि एक जन्मदिन उपहार, को ड्रागन को वर्ष मा जन्म। यहाँ मूल "ड्रागन" उपहार के छैन सक्दैन! र पहिलो कुरा फिक्री गर्न - यो scrapbooking कार्डको प्रविधी मा निर्मित छ। ड्रागन को जन्मदिन को अनुहार ... - कार्ड को सामने पक्षमा, को पाठ्यक्रम, आवेदन बन्द देखाउन छन्! र तपाईं यसलाई के गर्न सबै भन्दा राम्रो छ कसरी थाहा?
फोटो कार्यक्रम बच्चालाई ड्रागन स्टिकर लागि तयारी गर्न आकार मा "प्रकाशक" वा "Photoshop" संग "फिट" गर्न आवश्यक हुनेछ। यसलाई काटन गरेर तस्वीर बिगार्छ छैन र सिर्फ भित्र पृष्ठ पोस्टकार्ड लीन भन्दा राम्रो छ। तर आवेदन "रिसाएर ड्रैगन" वा "राम्रो बोसो - drakosha sniffing फूल" पहिलो पृष्ठमा स्थित छ (दृष्य स्वतः चयन कार्ड प्रकृति र कार्य दुवै सहभागीहरू को जन्मदिन को हास्य को अर्थमा मा निर्भर गर्दछ)।
मार्फत यो हुनुपर्छ कार्बन कागज फोटो मा खाली पानामा, अनुहार को कार्ड स्थिति स्थानान्तरण गर्न नै उल्लेख, र पृष्ठ को आकार। परिणामस्वरूप टेम्पलेट मा अनुहार बाहिर काटन, पृष्ठ यसलाई लागू भएको कागज को आवेदन - को ड्रागन। सही प्वाल स्थान मास्टर जाँच पछि ध्यान यो कटौती गर्नुपर्छ। अब यो सबै विनोदी तस्वीर देखेको जोडेको - कार्टून: को जन्मदिन केटा को अनुहार संग एक ड्रागन!
अझ मूल कार्ड बन्न क्रममा यो मात्रा थप गर्न सकिन्छ। यो प्रभाव एकदम सजिलो छ: तपाईं बस ड्रागन शरीर वरिपरि रहन आवश्यक "गुच्छे।" तिनीहरूले कागज र कपडा वा कृत्रिम छाला जस्तै, सबै भन्दा विविध सामाग्री गर्न सकिन्छ। एक त्रिकोण वा आधा गोलो आकार भएको प्रत्येक "पत्र", आधार को ड्रागन शरीर गर्न चिपके छ।
यसलाई जहाँ तपाईं "तराजू" align चाहनुहुन्छ कडाई, सोझो पालन गर्न आवश्यक छ। सम्बन्ध गाँसिसकेको यसको पुच्छर देखि, को ड्रागन तल बाट सुरु गर्न आवश्यक छ। ट्यूटोरियल वा poluovaly प्रत्येक पछि श्रृंखला जस्तै माछा तराजू छ, अघिल्लो पङ्क्ति को आधार कवर गर्नुपर्छ।
निमन्त्रणा गरिने संग्रह जन्मदिन कोठा नै, को उत्सव अघि, साथै सजाउनु। तपाईं बधाई संग संवाददाता पोस्टर को पर्खालहरु मा झुन्डियो गर्न सक्नुहुन्छ। पनि केही धेरै प्रतिभाशाली नजिक यो दिन विनोदी पर्खाल अखबार वा व्यक्तिगत फोटो को एक महाविद्यालय बाहिर बनाउन।
पनि गिलास मा ठूलो आवेदन देखिन्छ। यो एक पारदर्शी Vinyl फिलिम मा आवश्यक छ लागि दाग गिलास रंग गर्भधारण रेखाचित्र फोटो गर्न, आकृति यसको रंग वरिपरि कटौती। अब तपाईं निडर भई झ्यालमा वा कौसी मा, त्यहाँ doorway कुनै पनि गिलास मा परिणामस्वरूप आवेदन गोंद गर्न सक्नुहुन्छ।
फिल्म पानी संग चिपके छ। पछि राम्ररी ग्लास र फिलिम, ठाउँमा आवेदन clings बीच हावा हटाउन ironed। तर छुट्टी माथि छ, यो सजिलै हटाउन सकिन्छ। यसबाहेक, ग्लास लगभग पूर्ण सफा रहन्छ! यो विकल्प ग्लास सजावट धेरै सजिलो र केदारनाथ वा gouache मा painting पुरानो तरिका भन्दा बढी व्यावहारिक छ। ग्लास बाट रंग बन्द धुन - यो हाय, यो एक अरोचक, समय खपत र बैगुनी छ, छ।
कागज बाहिर एक पिरामिड कसरी बनाउने? विस्तृत निर्देशनहरू
Flounce स्लिभ संग सुन्दर पोशाक: रोचक विचारै, ढाँचाहरू र प्रतिक्रियाहरू
विचार र फोटो - को रूखहरू पातहरु को ढाँचाहरू
लसुन व्यञ्जनहरु संग खट्टा क्रीम संग Zucchini
सावधान रहनुहोस्: बिरालोहरु मा कीडे, लक्षण - सम्झना छैन
भुईँकटर Pancho संग केक तयार
अभिनेता Aleksandr Dreyman: जीवनी, फोटो। सबैभन्दा चलचित्र र टिभी श्रृंखला
कसरी घर मा आइसक्रिम बनाउन, र यो आवश्यक छ कि